Uvimba woLondolozo lweeNkcukacha zaKudala | Gcina A Isitimela
Udidi: Uhambo loLoliwe
ekhaya > Uhambo loLoliwe
Ixesha lokuFunda: 7 imizuzu Ukusefa esofeni, ukumisa inkampu, uhambo lwendlela – ukuba sele uzame ezi ndlela zokuhamba, ulungele ukutsibela kwinto entsha. Ezi ndlela zilandelayo zilishumi zokuyila zokuhamba ziya kukwenza ufumane imisebenzi emitsha kwaye ujonge iindawo ezizodwa ezingaziwayo. Rail transport is the most environmentally friendly…
Ixesha lokuFunda: 9 imizuzu Inomdla kuyilo loyilo, esisityebi kwimbali, kweyona dolophu intle ehlabathini, i 10 Iimpawu zomhlaba ezidumileyo zokundwendwela ngololiwe ekufuneka zikuluhlu lwakho lwamabhakethi. Ukusuka eYurophu ukuya eTshayina, ngesango elidumileyo laseBerlin, nakwabaNqandiweyo…
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iBritane, Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Uloliwe Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, ...
Ixesha lokuFunda: 8 imizuzu Ngaphesheya kwetaiga yaseSiberia, elona chibi lakudala iBaikal, yasendle Kamchatka ukuya eMoscow, la 12 Iindawo ezimangalisayo zokundwendwela iRussia ziyakuthatha umphefumlo wakho. Khetha nje indlela yakho yokuhamba, pakisha iiglavu ezishushu okanye idyasi yemvula kwimozulu ekhohlisayo, kwaye silandele eRashiya….
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu Ukusuka kwiinqaba zaseYurophu nakwiidolophu zakudala ukuya eHong Kong enomdla, la 7 Iindawo zokuthanda umhlaba wonke ziya kwenza uthando lwakho lunyuke. le 7 Iindawo zokuthanda yindawo efanelekileyo yokubeka isahluko esihle kwibali lakho lothando, kunye nokuvuselela umlingo. Eli nqaku lalinjalo…
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Ukuhamba ngololiwe eTshayina, Uloliwe Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy...
Ixesha lokuFunda: 7 imizuzu Ukusuka kwi-movie yomntu wonke oyintandokazi yaseYurophu “Iinduli ziyaphithizela sisandi sengoma”. Ewe oku kulandelayo 12 iintaba ziya kwenza ukuba ucule kwaye intliziyo yakho idanise. Ukusuka kwiiAlps kunye nePyrenees ezidumileyo ukuya kwiigugu ezifihliweyo zeCzech Republic, Sijoyine ngokunyuka…
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iOstriya, Uloliwe Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe Ukuhamba ngeLuxembourg, ...
Iingcebiso zokuhamba ngeMoto, Uhambo loLoliwe, Uloliwe Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Zokuhamba Qeqesha Greece, Uloliwe kuhambo Italy, Ukuhamba eYurophu, ...